Kukumbira kubatsirwa nekukurumidza
“Kurumidzai kundibatsira” (5)
Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi rwechiyeuchidzo. 70 Haiwa Mwari, ndinunureiwo;Haiwa Jehovha, kurumidzai kuzondibatsira.+ 2 Dai vaya vari kutsvaga kundiuraya*Vakanyara uye vakashaya pekupinda. Dai vaya vari kufarira dambudziko ranguVakadzokera vachinyara. 3 Dai vaya vari kuti: “Tsvatu waro! Tsvatu waro!” Vakamanikidzwa kudzokera vachinyara. 4 Asi itai kuti vaya vari kukutsvagaiVapembere nemufaro vachikufarirai.+ Vaya vanoda mabasa enyu ekuponesa ngavagare vachiti: “Mwari ngaakudzwe!” 5 Asi ini handina simba uye ndiri murombo;+Haiwa Mwari, kurumidzai kundibatsira.+ Ndimi mubatsiri wangu uye mununuri wangu;+Haiwa Jehovha, musanonoka.+
^ Kana kuti “kutsvaga mweya wangu.”